Kooxda Chelsea oo eriday tababarahedii ka dib guuldaradii West Brom Albion – SBC
Kooxda Chelsea oo eriday tababarahedii ka dib guuldaradii West Brom Albion
Kooxda kubada cagta Chelsea ee ka dhisan Galbeedka magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa saacado ka hor ku dhawaaqdey in shaqadii laga eryay tababare Andre Villas Boas ka dib markii kooxdu ay la soo daristey guuldarooyin xiriir ah iyo khilaaf ka dhex aloosmay ciyaartoyda iyo tababaraha.
Warka lagu baahiyey barta Internet-ka ee in Roberto Di Matteo oo ahaa kuxigeenkii tababare Andre Villas Boas oo isaga horey ay u soo raacdayesya kooxda West Brom ee shaley (Sabtidii) Chelsea ku garaacdey 1-0, kaasi oo sii ahaan doono tababaraha KMG ah ee Chelsea ilaa iyo dhamaadka xili ciyaareedkan.
“Maamulka Chelsea waxay u mahadcelinayaan isaga (Andre Villas-Boas) gaar ahaan rikoorkiisa kooxda, isla markaana waxay ka xun yihiin sida deg deg ah ee xiriirku u soo dhamaaday” ayaa lagu yiri warka lagu daabacay website-ka Chelsea.
Villas-Boas waxaa xilka tababarenimada Chelsea uu hayey mudo 8 bilood oo kaliya, waxaana uu ugu kacay mulkiilaha kooxda Chelsea in ku dhaw 20 milyan oo doolar oo kagala soo wareegay kooxda FC Porto ee dalka Portogal, wuxuu noqonayaa tababarihii 8aad ee uu eryo maalqabeenka Ruushka u dhashay ee iska leh kooxda Chelsea Roman Abramovich oo horey ugu eryi jiray tababarayaasha hadii ay ku guuldareystaan in ay qaadaan kooxda Champion League-ga ee qaarada Yurub loo cararo.
Guuldarooyinka la soo darsay Chelsea ayaa soo taxnaa mudooyinkii ugu dambeeyey iyadoo 12-kii kulan ee ugu dambeeyey ee Premier League-ga sadex kulan oo kaliya ay ka badisay halka inta kale ay gashay barbardhac ama guuldaro loo geystey.
Waxaa kale oo xaalada tababare AVB biyo kulul ku sii shubay ka dib markii wareega 16 ee Champion League-ga kooxda Napoli ee reer Talyaani ay 3-1 ku garaacdey lugtii koowaad ee ciyaaraha 16-ka.
Mudooyinkii ugu dambeeyey waxaa khilaaf xoogan uu ka dhex aloosnaa Tababare AVB iyo qaar ka mid ah ciyaartoyda rug cadaaga ah ee Chelsea oo ay ugu horeeyaan Ashley Cole, Fernando Torress, Frank Lampard iyo kuwa kale kuwaasi oo uu ku cabay binjiga ama keyka ka dib markii ay ka madax taageen amaradiisa iyo qaab ciyaareedka shaxdiisa oo ay u arkeen mid aan lagu keeni karin wax guul ah.